Akụkọ - Ọkụ Lithium Ion: Ihe iyi egwu na mbupu akpa
Ọkụ lithium -ion batrị: ihe iyi egwu na mbupu akpa
Site 2015 na -ewetara ihe e mere atụmatụ 250 metụtara electric hoverboard ọkụ na e dere dị ka United States Consumer Product Safety Commission. Otu kọmiti ahụ na -akọ na echetara batrị Toshiba 83,000 na 2017 n'ihi ọkụ na nchekwa.
N'ọnwa Jenụwarị 2017, ụgbọ ala mkpofu NYC bụ isi ihe tụrụ ndị agbata obi n'anya mgbe batrị Lithium ion gbawara na kọmpụta nke gwongworo ahụ. Ọ dabara na onweghị onye merụrụ ahụ.
Dị ka otu nnyocha ngalaba National Fire Data Center nke US Fire Administration si kwuo, n'agbata Jenụwarị 2009 na 31 Disemba 2016, akụkọ ọkụ ọkụ E-sịga mere na US mere na US 133 n'ime ihe ndị a na-ebute mmerụ ahụ.
Ihe akụkọ ndị a niile na-ekerịta, bụ na ihe kpatara ihe omume ọ bụla bụ batrị lithium-ion. Batrị lithium ion aghọwo akụkụ dị mkpa nke ndụ kwa ụbọchị. Eji ya na kọmpụta anyị, ekwentị mkpanaka, ụgbọ ala, ọbụna sịga e-sịga, enwere ihe elektrọnikụ ole na ole na-anaghị eji batrị ndị a oke nju. Ihe ewu ewu dị mfe, batrị ka mma maka obere nha. Dabere na ụlọ akwụkwọ sayensị Australia, batrị LI siri ike okpukpu abụọ karịa batrị NiCad ọdịnala.
Kedu ka batrị Lithium Ion si arụ ọrụ?
Dabere na ngalaba nke ike: "Batrị mejupụtara anode, cathode, separator, electrolyte, na ndị nchịkọta abụọ ugbu a (nke ọma na nke adịghị mma). Anode na cathode na -echekwa lithium. Mmegharị nke ion lithium na -emepụta elektrọn efu na anode nke na -emepụta ụgwọ na onye nchịkọta dị mma ugbu a. , kọmputa, wdg) na onye nchịkọta ihe adịghị mma ugbu a.
Gịnị kpatara ọkụ ahụ niile?
Batrị Lithium Ion na -edobe n'okpuru Thermal Runaway. Nke a na -eme mgbe onye na -egbochi mmiri electrons na batrị na -ada.
Mmetụta na ụlọ ọrụ mbupu
N'ọkụ dị egwu na 4 nke Jenụwarị 2020 COSCO Pacific nwetara ọkụ akpa mgbe ọ na -aga site na Nansha, China maka Nhava Shevaby, India. e nyochara ihe mebiri emebi.
MY Kanga, n'ọdụ ụgbọ mmiri Dubrovnik, Croatia bụ mfu zuru oke mgbe ụgbọ ahụ nwetara oke ọkụ. Ọkụ a bụ ọkụ na-agba ọsọ nke ọtụtụ batrị LI-on n'ụgbọ mmiri ntụrụndụ dị n'ime ebe a na-adọba ụgbọ mmiri. Ka ọkụ ahụ na -arịwanye elu, a manyere ndị ọrụ na ndị njem ịhapụ ụgbọ ahụ.
Dị ka onye na -agụ maara, n'oké osimiri enwere ụdị ọkụ ọkụ ise dị iche iche. Batrị A, B, C, D, na K. Lithium Ion bụ ọkụ klaasị D. Ihe egwu dị ebe ahụ bụ na enweghị ike imenyụ ha site na mmiri ma ọ bụ ịkụda site na CO2. Ọkụ klaasị D na -ere oke ọkụ iji mepụta oxygen nke ha. Nke a pụtara na ha chọrọ ụzọ pụrụ iche iji gbanyụọ ha
Ruo n'oge na -adịbeghị anya enwere naanị ụzọ abụọ iji lebara ọkụ batrị lithium anya. Onye na -agbanyụ ọkụ nwere ike ikwe ka ọkụ eletriki ahụ na -ere ọkụ ruo mgbe mmanụ niile gwụrụ, ma ọ bụ jiri nnukwu mmiri dochie ngwaọrụ ahụ na -ere ọkụ. “Ihe ngwọta” abụọ a nwere ọghọm dị njọ. Mmebi nke ọkụ na mpaghara gbara ya gburugburu nwere ike ịdị mkpa na -eme ka anabataghị nhọrọ nke mbụ. Na mgbakwunye, ọkụ na ụgbọ mmiri, ụgbọ elu ma ọ bụ mpaghara akpọchiri akpọchi nwere ike bụrụ oke mbibi. Ịnyanwu ọkụ dị mkpa.
Iji nnukwu mmiri mee ọkụ ahụ nwere ike belata okpomọkụ nke batter n'okpuru ebe mgbanyụ ọkụ (180C/350F), agbanyeghị, onye na -agbanyụ ọkụ nọ nso na batrị na -ere ọkụ na oke mmiri nwere ike bute mmebi nke akụrụngwa na arịa ụlọ na -atụghị anya ya.
Ihe ọhụrụ ọhụrụ na -enye nhọrọ ọhụrụ, dị irè karị. Ọ dị mkpa iji belata okpomọkụ nke batrị na mgbapụta ọkụ, banye na uzuoku (anwụrụ ọkụ, nke na -egbu egbu) ngwa ngwa. A na -eme nke ọma na teknụzụ site na iji chaplet iko emegharịrị emebere nke ọma iji nweta okpomọkụ na uzuoku. Nnwale na -egosi na a na -emenyụ laptọọpụ na -ere ọkụ n'ime sekọnd iri na ise. Usoro nke ngwa na -echebe onye ọkụ ọkụ.
Teknụzụ ọhụrụ a bụ n'ihi mbọ CellBlock nyere ọtụtụ ụlọ ọrụ aka ịnagide ọkụ batrị lithium. Ndị ọkà mmụta sayensị CellBlock chọpụtara na ọkụ batrị lithium ga -eme n'ọnụ ọgụgụ na -eto eto. Akụkụ akụ na ụba dị iche iche ga -emetụta gụnyere nrụpụta, ụgbọ elu, ahụike na ndị ọzọ. Ndị injinia CellBlock na -eleba anya n'ihe egwu ụgbọ njem na ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ lithium butere ndị na -anya ụgbọ elu (ibu na ndị njem) na ugbu a ụgbọ mmiri.
Ihe egwu Maritime
Akụ na ụba anyị zuru ụwa ọnụ, a na -ebupu ngwongwo n'ụwa niile, na n'ime ọtụtụ mbupu ndị ahụ bụ batrị lithium. Organizationlọ ọrụ na -enye mbupu nọ n'ihe ize ndụ n'oge batrị lithium nọ n'ụgbọ. Inwe ike imenyụ batrị na -abanye ọkụ ọkụ ngwa ngwa, tupu nnukwu mmebi emee nwere ike ịdị mkpa.
Ndị ụgbọ elu abụọ efunahụla 747 n'ihi ọkụ lithium. Nke ọ bụla nwere ihe karịrị batrị 50,000 n'ime ụgbọ ahụ ma chọpụta ebe mgbanye ọkụ na arịa ndị ahụ. Ụgbọ mmiri na -ebu nde kwuru nde batrị. Inwe ike imenyụ ọkụ batrị lithium ngwa ngwa nwere ike ime ọdịiche dị n'etiti ihe merenụ na ọdachi.
Oge ezipụ: Aug-11-2021
Weebụsaịtị ụlọ ọrụ nleta
Okwu: Mba. Mpaghara 49 Western, Liuyang, Xiachen Street, Jiaojiang, Taizhou City, Zhejiang Province China
Ekwentị: +8613989889818, +8618057629598, +8615215814427, +8615857617817, +8615757610201
Nọmba ekwentị: 0576-82367121
Ọkụ lithium -ion batrị: ihe iyi egwu maka ...
Ngosipụta ọgba tum tum Chongqing na 2021, ...
Mbupu & Ụgwọ ibu na -abawanye, F ...
Atụmatụ ịtụgharị egwu siri ike, dị mfe ịhazi ...